Paikady 5 hahazoana fifantohana amin'ny Internet | Martech Zone
Talata, Septambra 16, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety ho lahatsoratra mahatsikaiky ity raha jerena fa mihena kely amin'ny famakiana ny bilaogiko. Ny marina dia fantatro ny antony mahatonga azy io, saingy tsy manam-potoana aho izao hampiasa vola hampiatoana azy. Tsy misy ahiahy anefa, haodiko tsy ho ela io!
Miaraka amin'izany, nieritreritra be momba izay làlana azon'ny orinasa sy olon-tsotra aleha aho mba hisarihana ny sain'ny mpiara-mianatra aminy, ny vinavinany ary / na ny mpanjifany amin'ny tranokala ary napetrako hatrany amin'ireo 5. Ireo paikady ireo dia afaka alefa indray mandeha, indray mandeha, na azonao atao ny mifidy izay lalana haleha.
Ataovy mahatsikaiky - Heveriko fa nahazo hatsikana tsara aho saingy ny fandikana izany hatsikana amin'ny tranonkala izany dia mety ho sarotra, ary ho mahery setra mihitsy aza. Raha azonao esorina anefa dia mahazo mpandresy ianao.
Mahaiza miavaka - Lazao amin'ny rehetra fa ianao tsy manao bilaogy intsony… Ary araho izany 3 lahatsoratra bebe kokoa ary fifindrana amin'ny WordPress. Huh? Eny, tsy azoko koa izy io fa nahatonga ny rehetra hiresaka amin'ny Internet.
Mahaiza mandanjalanja - Misy fiainana manan-tsaina any… Na dia eo amin'ny tontolon'ny bilaogy aza. Ny sasany amin'ireo fanarahana lehibe indrindra dia eto ireo tranonkala izay manome ny atiny mandresy lahatra eritreritra sy adihevitra manan-tsaina - miaraka amin'ny zava-misy hanohana azy.
Mahareta - Raha hisafidy lohahevitra ianao dia asehoy izany tsy tapaka amin'ny fampisehoana sy ny vanim-potoana. Vitsy dia vitsy ny tranonkala manao an'io, ao anatin'izany ny ahy. Mila fanoloran-tena (fiankinan-doha?), Fikirizana ary faniriana tsy hanao sorona na oviana na oviana ny kalitao sy ny vanim-potoana. Fihetsika henjana izany.
Mandehana hatraiza hatraiza - Tsy mitsahatra tsotra izao ny olona sasany miasa! Mino aho fa ny ankamaroan'ireto manaraka nataoko tao amin'ny tranonkalako ireto dia tamin'ny alàlan'ny resaka mitohy amin'ny sehatra media sosialy hafa sy bilaogy manerana ny tranonkala. Manome valiny maharitra ny Internet sy ny asa mafy ny Internet.
Aloavy ny alehanao - Raha kamo ianao dia afaka mandany amboaram-bandy sy Adsense. Raha tena tsara anefa ianao, dia afaka mahita fomba fampiasam-bola amin'ny orinasanao tsy manam-paharoa ary manana tambin-karena lehibe. Manaraka ireo tranonkala izay manao ny vola koa manome fanazavana lehibe momba ny fandaniana azy.
Tags: tsaracalacanismisarika ny sainamahamarikajohn chowrobert scobleshoemoneytechcrunchLohahevitra
Iza no Twitter anao?
Sep 17, 2008 amin'ny 12: 19 AM
Manampy enina izany, sa tsy izany? Mbola hamaky tsara ihany aho anyway
Sep 17, 2008 amin'ny 11: 45 AM
Mahiratra ny masonao, Otir! Tena sahirana aho tamin'ny fividianana ny lalanao ho tetika ary nanampy izany tamin'ny minitra farany. 🙂
Sep 18, 2008 amin'ny 7: 54 AM
Misaotra betsaka anao momba ireo torohevitra, tena mahasoa izy ireo,
Te-hiteny fotsiny aho fa ny fitorahana bilaogy ho an'ny vola dia nanjary sarotra tokoa tato ho ato satria ny tetika taloha dia tsy mandeha amiko intsony.
Misaotra anao nizara taminay ireto torohevitra ireto (ary sarin-tahaka tsara koa).
Sep 19, 2008 amin'ny 9: 43 AM
Hey, Mampihomehy aho!. Ary hendry sy tsy miovaova aho. Ary na dia tsy aiza na aiza aho dia any amin'ny toerana iray. Ka ny 3.5 amin'ny 6 dia tsy ratsy loatra.
Mety tsy hanandrana hanao bilaogy hahazoana vola aho, indrindra satria tsy te-hametraka fotoana sy ezaka amin'izany aho. Hampiasa ny bilaogiko hivarotra ny bokiko aho, isaky ny afaka mamoaka ilay moana aho.